Izindleko zamasheya Yixing Cleanwater Chemicals Co., Ltd.
I-Cleanwat Polymer Heavy Metal Treatment Agent
Ukuhlaziywa kokungenzeka kokusetshenziswa ekuhlanzeni amanzi angcolile ezimbonini 1. Isingeniso esiyisisekelo Ukungcoliswa kwensimbi enamandla kubhekisela ekungcoleni kwemvelo okubangelwa izinsimbi ezisindayo noma izinhlanganisela zazo. Ikakhulukazi idalwa yizici zabantu ezifana nezimayini, ukuchithwa kwegesi engcolile, ukuchelelwa kwendle kanye nokusetshenziswa kwe-heav...
Ingabe i-flocculant ingafakwa ku-MBR membrane pool?
Ngokungezwa kwe-polydimethyldiallylammonium chloride (PDMDAAC), i-polyaluminium chloride (PAC) kanye ne-flocculant eyinhlanganisela yalokhu okubili ekusebenzeni okuqhubekayo kwe-membrane bioreactor (MBR), zaphenywa ukuze kwehliswe i-MBR. Umphumela wokungcola kwe-membrane. Ukuhlolwa kukala i-ch...
I-Dicyandiamide formaldehyde resin decoloring agent
Phakathi kwezindawo zokuhlanza amanzi angcolile ezimbonini, ukuphrinta nokudaywa kwamanzi angcolile kungenye yezindawo ezingcolile okunzima kakhulu ukuzisebenzisa. Inokwakheka okuyinkimbinkimbi, inani eliphakeme le-chroma, ukugxila okuphezulu, futhi kunzima ukuyehlisa. Ingenye yamanzi alahlwayo asezimbonini abucayi kakhulu futhi okunzima ukuwaphatha ...
Unganquma kanjani ukuthi hlobo luni lwe-polyacrylamide
Njengoba sonke sazi, izinhlobo ezahlukene ze-polyacrylamide zinezinhlobo ezahlukene zokwelashwa kwendle kanye nemiphumela ehlukene. Ngakho-ke i-polyacrylamide yizo zonke izinhlayiya ezimhlophe, indlela yokuhlukanisa imodeli yayo? Kunezindlela ezi-4 ezilula zokuhlukanisa imodeli ye-polyacrylamide: 1. Sonke siyazi ukuthi i-cationic polyacryla...
Izixazululo ezinkingeni ezivamile ze-polyacrylamide ekukhipheni amanzi ngodaka
Ama-flocculants e-Polyacrylamide asebenza kahle kakhulu ekususeni udaka kanye nokulungisa indle. Amanye amakhasimende abika ukuthi i-polyacrylamide pam esetshenziswa ekukhipheni amanzi ngodaka izohlangabezana nezinkinga ezinjalo nezinye. Namuhla, ngizohlaziya izinkinga ezimbalwa ezivamile zawo wonke umuntu. : 1. Umphumela we-flocculation we-p...
Buyekeza ngenqubekelaphambili yocwaningo lwenhlanganisela ye-pac-pam
Xu Darong 1,2, Zhang Zhongzhi 2, Jiang Hao 1, Ma Zhigang 1 (1. Beijing Guoneng Zhongdian energy conservation and Environmental Protection Technology Co., Ltd., Beijing 100022; 2. China University of Petroleum (Beijing), Beijing 102249 ) I-Abstract: emkhakheni wokulungiswa kwamanzi angcolile kanye nezinsalela zemfucuza...
Ikhwalithi Ephakeme YaseShayina Amanzi Aqinile Khipha I-Chlorine Fluoride Yezinsimbi Ezisindayo Ukungcola Kwezinsimbi
I-ejenti yokukhipha i-heavy metal CW-15 iyisibambi sensimbi esindayo esingenabuthi futhi esivumelana nemvelo. Leli khemikhali lingakha inhlanganisela ezinzile enama-ion ensimbi amaningi aguquguqukayo futhi ahlukanisiwe emanzini angcolile, njengalezi:Fe2+,Ni2+,Pb2+,Cu2+,Ag+,Zn2+,Cd2+,Hg2+,Ti+kanye ne-Cr3+, bese ifinyelela inhloso yokukhipha i-hea. ..
Ifektri ngqo i-China Diallyl Dimethyl Ammonium Chloride Dadmac
Sawubona, lona umkhiqizi wamakhemikhali e-cleanwat wase-China, futhi ukugxila kwethu okuyinhloko ku-decolorization yendle. Ake ngethule omunye wemikhiqizo yenkampani yethu-DADMAC. I-DADMAC iyinhlanzeko ephezulu, ehlanganisiwe, kasawoti we-quaternary ammonium kanye ne-high charge density cationic monomer. Ukubukeka kwayo kunemibala...
Muva nje, inkampani yethu ibambe umsebenzi wokuphromotha wangoSepthemba futhi yakhipha le misebenzi elandelayo elandelayo:I-Water Decoloring Agent kanye ne-PAM zingathengwa ndawonye ngesaphulelo esikhulu. Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zama-ejenti okususa umbala enkampanini yethu.I-Agent Yokususa Umbala Wamanzi i-CW-08 isetshenziswa kakhulu ...
Ukusakazwa bukhoma kwe-September Purchasing Festival ikakhulukazi kuhlanganisa ukwethulwa kwamakhemikhali okuhlanza amanzi angcolile kanye nokuhlolwa kokuhlanza amanzi angcolile. Isikhathi esibukhoma ngu-9:00-11:00 am(Isikhathi Esijwayelekile Se-CN) Sept.2,2021, lesi isixhumanisi sethu esibukhoma https://watch.alibaba.com/v/785bf2f8-afcc-4eaa-bcdf-57930. ..
I-Chemical Auxiliary Agent I-DADMAC Yokuhlanza Amanzi Angcolile Ezimbonini
Sawubona, lona umkhiqizi wamakhemikhali e-cleanwat wase-China, futhi ukugxila kwethu okuyinhloko ku-decolorization yendle. Ake ngethule omunye wemikhiqizo eyinhloko yenkampani yethu-DADMAC. I-DADMAC iyinhlanzeko ephezulu, ehlanganisiwe, kasawoti we-quaternary ammonium kanye ne-high charge density cationic monomer. Ukubukeka kwayo icol...
Umhlangano wokufunda nge-Ejenti Yokukhipha Insimbi Enzima
Namuhla, sihlele umhlangano wokufunda ngomkhiqizo. Lolu cwaningo ikakhulukazi lomkhiqizo wenkampani yethu obizwa ngokuthi i-Heavy Metal Remove Agent. Hlobo luni lezimanga lo mkhiqizo onalo? I-Cleanwat cW-15 iyimbambi yensimbi enzima engenabuthi futhi evumelana nemvelo. Leli khemikhali lingakha umfelandawonye ozinzile...